हामी गुणस्तरीय सामग्री दिन्छौं - Kendrabindu Nepal Online News
हामी गुणस्तरीय सामग्री दिन्छौं
अर्थ, कर्पोरेट टक, सौन्दर्य
सन् २०१४ देखि आफ्ना उत्पादनहरू लिएर नेपाली बजारमा आएको रोथो मेन्थोलाटमले छोटो समयमै नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादनहरुलाई लोकप्रिय बनाउन सफल भएको छ । जापानी प्रबिधिवाट उत्पादन हुने यसका उत्पादनहरु सौन्दर्य देखि स्वास्थसंग पनि जोडिएको छ ।
रोथो मेन्थोलाटनले नेपाली बजारमा भित्राएको सन्प्ले नेचुर सन्सक्रिनको अवसरमा उक्त कप्पनीका ब्राण्ड मेनेजर प्रदिप मण्डलसंग केन्द्रबिन्दुले गरेको कुराकानी ।
रोथो मेन्थोलाटम के हो ?
रोथो मेन्थोलाटम बहुराष्ट्रिय जापानिज कम्पनि हो । जापानमा स्थापना भएको रोथोको १ सय २० वर्षको इतिहास छ भने अमेरिकामा स्थापना भएको मेन्थोलाटमको १ सय बर्षको रहेको छ । यि दुबै संस्था मिलेर रोथो मेन्थोलाटम बनेको हो । अहिले हामी बिश्वका २ सय देशमा सक्रिय रहेकाछौ । यो कम्पनीका उत्पादनहरु एशिया लगायत अमेरिका, युरोप, अफ्रीकाका धेरै मुलुकहरुमा लोकप्रिय रुहेका छन् । विश्वको ७३ वटा देशमा रोथो मेन्थोलाटमको फ्याक्ट्री रहेका छन् । यो वाहेक हाम्रा केही उत्पादनहरु बिश्वको एक नम्बरमा पर्ने गरेको छ । हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधी, त्यसमा पनि आँखा सम्बन्धि रोगहरुका लागि हामी विश्वकै १ नम्बरमा रहेका छौं ।
रोथो मेन्थोलाटमको उत्पादनहरु के कस्ता छन् ?
रोथोले फर्मास्युटिकल्स र कस्मेटीक दुबै उत्पादन गर्ने गर्छ । रोथो को आफ्नै इतिहास रहेको कारण हामी सेमी मेडिकेटेड प्रडक्ट र नेचुरल प्रडक्ट पनि उत्पादन गर्छौ । कस्मेटीक प्रडक्टमा हामीसंग सन्स्क्रीम, फेसीयल क्रिम, लगायत अन्य क्रिमहरू रहेका छन् भने फर्मास्युटिकल्समा हामीसंग आई ड्रप, रब बामहरु रहेको छ । त्यसमा पनि हामीले हालै न्यू रोथो आई ड्रपलाई बजारमा ल्याएका छौ ।
नेपाली बजारमा यस्को भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा रोथोका उत्पादनहरु चर्चित नभएपनि थोरै रहेका प्रयोगकर्ताहरुले भने निकै रुचाउनु भएको हामीले पाएका छौं । अहिले नेपालमा हाम्रा १२ वटा प्रडक्टहरुलाई बजारमा उपलब्ध गराएका छौं । हामी सन् २०१४ देखी मात्र नेपाली बजारमा आएको कारण हाम्रो मार्केट राम्ररीनै अगाडी बढीरहेको छ । भविष्यमा पनि अरु देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि हामी पहिलो नम्बरमा पुग्ने छौं ।
हालै बजारमा आएको नयाँ प्रडक्टको वारेमा केही बताईदिनु न ?
हामीले हालै नेपाली बजारमा सनप्ले सनस्क्रीनलाई ल्याएका हौं । यो पूर्णरुपमा प्रकृतिक उत्पादन हो । म्यानमारमा निकै नै चर्चित छ थानाका । यहाँका स्थानिय मानिसहरु सनस्क्रीनको लागि त्यसैको प्रयोग गर्छन् । हामीले उनीहरुले प्रयोग गर्ने थानाकामा रहेको मुख्य इन्ग्रेडियन्टलाई लिएर यो क्रिम उत्पादन गरेका हौं । एकदमै उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिएको सनस्क्रीनलाई हामी शतप्रतिशत प्राकृतिक छ भन्छौं । यसमा हामीले कुनै पनि किसिमको रसायन मिसाएका छैनौ । यही कारणले पनि हाम्रा उत्पादनहरु अरुको भन्दा फरक भएको पनि हो ।
केमिकल समावेस छैन भन्नु हुन्छ तर यो एस पि एफ ५०, रसायन हैन र ?
होइन । थानाकामा यो एस पि एफ प्राकृतिक रुपमै पाइन्छ । हामीले त्यसैलाई प्रयोग गरेका हौं । जसलाई हामीले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर प्याकेजिङ गरेका हौं ।
तपाईहरुको उत्पादन नेपाली बजारमा कत्तिको खरिद गर्न सकिने किसिमको रहेको छ ?
हामी हाम्रा उत्पादनहरूलाई बिक्रि गराउदा ग्राहकलाई पैसामा भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउछौं । मलाई लाग्छ राम्रो गुणस्तर भएको सामग्री प्रयोग गर्न पाईयो भने ग्राहक पैसा खर्च गर्न हिचकिचाउदैनन् । म भन्दिन हाम्रो प्रडक्ट सस्तो छ भनेर तर पक्कै पनि गुणस्तरमा भने अगाडी छ । यो सजिलै नेपाली बजारमा उपलब्ध पनि रहेको छ ।